10 Tips to build websites | Ahkeno's Blog
10 Tips to build websites
April 3, 2012 April 3, 2012 ~ ahkeno
အစကတော့ ဒီရက်အပိုင်းအတွင်း ကို သိင်္ဂါရတောင်းထားတဲ့ Joomla ရဲ့ Template အကြောင်းလေး ရေးမလို့ ပါပဲ။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တိုင် ရိုးရိုး HTML template ကလေးကို 960gs နဲ့ဆောက်ပြီးနောက်မှ Joomla libiraiey တွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ချန်ထားတာ။ ဒီနေတော့ ရုံးမှာ အင်တာနက်မရတာနဲ့ အရင် ကချထားတဲ့ ebooks တွေကိုပြန်ဖတ်ရင်းနဲ့ ဒီပိုစ်လေးဟာ အားလုံးနဲ့ လည်း သက်ဆိုင်လိမ့်မယ် ထင်တာနဲ့ ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
1.Choose Focus: Make it Simple
ဒီ အချက်ကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဘယ် အရာပဲ လုပ်လုပ် အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ပါ။ Joomla ပဲဖြစ်ဖြစ် Drupal ပဲဖြစ်ဖြစ် WordPress ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ Framework ပေါ်မှာ ပိုင်နိုင်ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချပြီး အသုံးပြုသူ user နဲ့ target> audience/visitor တွေအတွက်လွယ် ကူရိုးရှင်းစွာဖော်ပြနိုင်တဲ့ website တခုဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
2.Make Plan Before we develope
Imagined as you build house.If you have plan to add extra rooms ,you must have extra spaces for them.Same like building website your website trem to add more future artciles,advenstiments,social media and etc you must have spaces for them beofre you develope website. ကိုယ့်ရဲ့ website ကို ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ကလေး တလုံးလို့ စိတ်မှန်းကလေးနဲ့ စတင် တည်ဆောက်ကြည့်ရအောင် ။ဥပမာ ကိုယ်ရဲ့ အိမ်ကလေး ကို ကြေငြာလေးတွေ ထည့်အုံးမယ်၊ တင်းဆောင်းပါးလေးတွေထည့်ထပ်အုံးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားရင် သူတို့ အတွက်နေရာလေးတွေ ကြို ရာထားပေးခဲ့ရမှာပါ။ joomla မှာ ဆို modules, Drupla မှာ ဆို blog ,Wordpres မှာဆို widgest ကလေးတွေဟာ အကီနို အခုရည်ညွန်းတဲ့ နေရာလေးတွေပါ။ ဒီနေရာလေးတွေကို Templaes/ Themes စဆောက်ထဲက နေရာယူထားသင့်ပါတယ်။
3.Before you develope website visit other website
ဒီ အချက်ကတော့ အကီနိုမှမဟုတ်ဘူး လူတိုင်း လူ့သဘာအရ ကိုယ်ဒါလုပ်တော့မယ်ဆို ကိုယ့်နဲ့ အလားတူတဲ့ ပြိုက်ဖက်တွေ ရဲ့ အခြေအနေကိုလေ့လာတတ်ကြတာ လူတိုင်းပါပဲ။ ဥပမာ ကိုယ်က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်တော့မယ်ဆို သူများ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေကို လေ့လာကြမှာပါ။ အဲဒီမှာ သူတို့ ဘာကြောင့် အောင်မြင်တယ် သူတို့ ဘာကြောင့် စီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကို မှတ်သားထားပါ။
4.Learn about other website features and web technology
5.Makealist down of website lists which you delight.
It may be the whole website or it may be part of website.And analysis what things make me attractive.Font?Desing?Content?Writer? etc
5.Who is your target?
Who will visit your site? Who is your audience? This is very important to developing your website.There are over ****** of websites through internet. ကိုယ့်ရဲ့ visitors ကဘယ်သူလဲ bယ်သူတွေအတွက် ရည်ညွန်းပြီး websites ကို တည်ဆောက်မှာလည်း။ဒီမေးခွန်းက အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ visitor အလိုက် ကိုယ့်ရဲ့ website ရဲ့ Plan ဟာ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဥပမာ ဘလော့လိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့ website တောင်မှ Plan တွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့ဟာ ဓာတ်ပုံ အသားပေးဘလော့လား ဒါဆိုရင်တော့ photo gallery ကတော့ မပါမဖြစ်ပါဝင်ရမဲ့ အချက်ပါ။ သတင်း နည်းပညာ အသားပေး ဘလော့လား ဒါဆိုရင်တော့ Tutorial/Freebie/ Download/ Free Ebooks/Sharing ကတော့ ကိုယ်ဘလော့မှာ အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး အချက်တွေပဲဖြစ်မယ်။ဖက်ရှင် အလှအပအသားပေး ဘလော့ဆိုရင်တော့ ကိုယ့် Themes/templates က အရောင်တောက်တောက်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါ။
5.Creating User Friendly Index page
Web site တခုလုံးရဲ့ အသက်ဟာ index page လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာစာ စာမျက်နှာပါပဲ။ အဲဒီမျက်နှာစာဟာ
5.1.Simple ရိုးရှင်းရမယ် (ရှုတ်ထွေးပြီး များပြားလှတဲ့ infromation တွေ ဟာ စာဖတ်သူ ကို ငြီးငွေ့သွားစေပါတယ်။)
5.2.Effective ထိရောက်ရမယ်(ကိုယ့် website ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရည်ညွန်းချက်တွေကို ထိရောက်စွာဖော်ပြထားရမယ်)အသုံးများပြီး လူတိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ Google ဟာ သူရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ Design နဲ့ သူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထိမိစွာဖော်ပြပေးပါတယ်။ Google က search engine ပါ ဒါကြောင့်မို့ သူမှာ Search box ကလွဲ ဘာဆိုဘာမှမဖော်ပြထားပါဘူး။
6.Breadcrumbs: Explain visitior where they are
Breadcrumbs ဟာ visitor ကို သူဘယ်ရောက်နေတယ် ဘယ်ကိုဆက်သွားရမယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားသင့်တယ်။ ဒါမှ visitor က သူနှစ်သက်ရာ Cartegory/articles/Contents ဆီတွေကိုသွားနိုင်မှာပါ။ Don’t Link to Current Page: ဒီနေရာမှာ Breadcrumbs: ဟာ ယခုရောက်နေတဲ page ကို ဘယ်တော့မှ linable မဖြစ်စေရပါဘူး။ဒီအချက်ကလေးကတော့ မှတ်မှတ်ရရ အကီနို လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်လောက်က Joomla နဲ့ post ကို Linkable ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ရေးထားတဲ့ post ကလေး share တုန်းက ကို everlearner ကရှင်းပြထားတဲ့အချက်ကလေးပါ။
7.Link:Link should be stand out.
They should different from surronunding content.If the link isabutton oraimage, make sure it changes it’s state whenauser hovers over it.
8.Cotent: Provied news content.
အားလုံးသိကြတဲ့ content is king ဆိုတဲ့ အတိုင်း အသစ်သစ်သော content ကို visitor တိုင်းစောင့်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဆိုဒ်တခုသွားကြည့်လိုက်လို့ တပတ်နေလဲ ဒီပိုစ်နောက်တပတ်နေလည်း ဒီပိုစ်ဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်း အဲဒီဆိုဒ်ကိုလာလည်သူဦးရေဟာ
9.Avoid using justified text.
ဒီအချက်ကိုတော့ အကီနို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အပတ်စဉ် ဂျာနယ် တခုကို Drupal နဲ့ အကီနိုရေးပေးတုန်းက စာဖြည့်တဲ့ သူနဲ့ အကီနိုနဲ့ အတော်အတန်ကို အချင်းများခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စလေးမို့ပါ။ unfortunately,justified text displays poorly on the Web at this point ဒီလို justified text ဟာ web ပေါ်မှာ အဆင်မပြေစွာမပြနိုင်တဲ့ အပြင် သူတို့က မြန်မာစာဖောင့်ကို သုံးတဲ့ အတွက် စာပိုဒ် အခွဲအပြုမှာ ဘယ်မှ မလှမပတဲ့ content တွထွက်ပေါ်လာရတာပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက အကီနို ဒီအချက်ကိုသာ သိခဲ့ရင် justified မလုပ်နဲ့လို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြန်ပြောနိုင်ခဲ့ရမှာ မသိခဲ့တော့ editor ပြောင်းမျိုးစုံကို ထည့်၊ blog theme ကိုပြန်ပြန်ရေးပေးနဲ့ တော်တော်ကို အလုပ်များခဲ့ရတဲ့အချိန်ပါ။
10.Group related items together.
Grouping items together conveys to users the fact that they’re related. တူရာလေးတွေစုပြီးဖော်ပြတော့ ဖတ်ရှုတဲ့ visitor တွေအတွက် အဆင်ပြေသလို content creator/editor တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဥပမာ.Example: Joomla>Category, Drupal>Taxonomy, WordPress>Tag
ဒီအချက်တွေ က အကီနို အဓိကထားဖတ်မိပြီး ဦးစားပေးရေးသားသွားတာပါ။ ဒီထက်မကကောင်းတဲ့ အချက်တေလည်းရှိပါသေးတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်ကိုတိုင်လေ့လာဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ahkeno@gmail.com မေးလ်းပို့ တောင်းနိုင်ပါတယ်။ တခု မေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ အကီနို ချက်ကနေ ဘယ်သူ့ကိုမှ လက်မခံတာမို့ ချက် invite လုပ်ပြီး မတောင်းဆိုပါနဲ့ လို့။
Posted in CMS, Tech News	basic steps of building websiteCMSwweb design
< Previous Set forward to your goal!
Next > petit palais
3 thoughts on “10 Tips to build websites”
ကျေးဇူးပါ … ညီမလေး အကီနိူ … ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ အကို ကွန်မန့်ကျေးဇူးကြောင့် ဆက်လက်ရေးသားဖို့ ခွန်အားတွေရပါတယ်။ 🙂
ကျေးဇူး အထူးဗျာ … 🙂
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် လေးတွေ သိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်…
ဒီလိုဆောင်းပါးလေးတွေ ဆက်လက် မျှဝေနိုင်ပါစေ… 🙂